Petition · Change name of country to Great Zimbabwe. · Change.org
Change name of country to Great Zimbabwe.
Clement Moyo started this petition to Parliament of Zimbabwe
The country has to move forward and break from the dark past associated with Zimbabwe. Zimbabwe is a great country and the word GREAT must not be relegated to the ruins of Great Zimbabwe, but must reflect and be associated with the future of the country and its people. Let's make GREAT Zimbabwe together.